အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အိမ်ထောင်စုတစုကို ကျပ် ၄၀,၀၀၀ နှုန်း စတုတ္တအကြိမ်မြောက် ထပ်မံပံ့ပိုးပေးမည်( ထပ်ပြီးဝမ်းသာစရာ သတင်းဗျို.) – Myanmar
အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အိမ်ထောင်စုတစုကို ကျပ် ၄၀,၀၀၀ နှုန်း စတုတ္တအကြိမ်မြောက် ထပ်မံပံ့ပိုးပေးမည်( ထပ်ပြီးဝမ်းသာစရာ သတင်းဗျို.)
အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် အိမ်ထောင်စုတစုကို ကျပ် ၄၀၀၀၀ နှုန်း ထပ်မံ ပံ့ပိုးပေးဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဆီက သိရပါတယ်။ ဒါက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဘေးကာလအတွင်း ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် အစိုးရရဲ့ စတုတ္တအကြိမ်မြောက် ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ကို အခု သီတင်းပတ်ကနေ စတင်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့က ကိုဗစ်-၁၉ အခြေအနေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြည်သူကို ပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခုလိုပံ့ပိုးပေးရာမှာ ပထမအကြိမ်က ကောက်ခံထားတဲ့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းတွေကို အခြေခံပြီး၊ ထပ်မံ စီစစ်ဆာင်ရွက်ထားတဲ့ စာရင်းအတိုင်း ပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း အခြေခံလူတန်းစားတွေကို ပထမအကြိမ် ထောက်ပံ့မှုအနေနဲ့ ရိံက္ခာငါးမျိုးကို လူဦးရေ ၅ ဒသမ ၃ သန်းထိ အစိုးရက ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဒုတိယအကြိမ်မှာ တစ်အိမ်ထောင်ကို ငွေကျပ် ၂၀,၀၀၀ နှုန်းနဲ့ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၅ ဒသမ ၄ သန်းကျော်၊ တတိယအကြိမ် မြောက်မှာလည်း တစ်အိမ်ထောင်ကို ငွေကျပ် ၂၀,၀၀၀ နှုန်းနဲ့ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၅ ဒသမ ၆ သန်းကျော်ကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။
အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တစ်ချို့မိန်းခလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံးကျနေပါပြီ